Slim Frame Glass Door Handle mkpọchi Solutions - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Ebughibu Glass Glass Door Aka mkpọchi Solutions
N'ịbụ ndị ewu ewu nke ụdị dị ntakịrị, ọnụ ụzọ iko iko dị larịị na-arịwanye elu na isi ahịa ahịa ahịa ụlọ n'ihi nghọta ha pụtara ìhè na oke njedebe.
Agbanyeghị, mkpọchi ọnụ ụzọ iko dị na ahịa siri ike ịmachi na enyo ụzọ enyo. Site na otutu nyocha ahia, YALIS amutala na ndi ahia nke uzo onu ogugu enwetala nsogbu dika odighi ime n’ime ya, uzo ole na ole, na udiri ya na ihe ndi ozo. Maka ebumnuche ndị a, YALIS jikọtara arụmọrụ na nka nke mkpọchi ụzọ ụzọ iko yana ọnụ ụzọ mepere emepe, na-eme ka nghọta na nghọta dị elu ruo na nke kachasị.
Mee atụmatụ A:
MGBE OZI na iko a na-eme na iko na-eme na profaịlụ aluminom ma jiri igwe CNC hazie ya. Ọ bụghị naanị na izi ezi nke ngwa dị elu, kamakwa enwere ike ime otu ngwụcha ahụ dị ka etiti nke ọnụ ụzọ iko ahụ, nke mere na ọnụ ụzọ iko ahụ na ọnụ ụzọ iko ahụ ga-enweta otu mmetụta.
1. The patented ipigide Ọdịdị nwere ike mgbochi-eme ihe ike oghere ma gbochie ị fromụ si nghọta ala.
2. MULTIPLICITY kwekọrọ na mkpọchi magnet, ọ nwere ike belata mkpọtụ mgbe emeghere mkpọchi ọnụ ụzọ ma mechie.
3. Kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ otu-glazed na ọnụ ụzọ nwere okpukpu abụọ.
4. The kemeghi iku ikpe nwere ike belata nwụnye isi ike.
Site na ewu ewu nke ọnụ ụzọ iko enyo, ọtụtụ ndị na-eme iko ụzọ na-eme ka ngwaahịa ha kwekọọ na mmasị ndị na-eri ego, mana n'otu oge ahụ ha ga-ahụ na ngwaike ọnụ ụzọ enweghị ike ịme ngwaahịa ha asọmpi na uru. Ya mere, YALIS azụlitela GUARD usoro ihe eji emechi ọnụ ụzọ eji eme ihe maka ọnụ ụzọ ebughi ụzọ.
1. GUARD adabara magnetik latch mkpọchi, mee ka ọnụ ụzọ mechie ọnụ.
2. Ihe a bu profaịlụ aluminom, nke enwere ike ime n'otu ngwucha dika uzo uzo iko.
3. Enwere ike ịhazi rosette dịka nha ihu ọnụ ụzọ iko ahụ iji gboo mkpa ndị ahịa.
4. Kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ otu-glazed.
Mee atụmatụ C:
A: Igwe Splint + YALIS Ejiri
90mm Square Glass Splint + YALIS orzọ leszọ
1. Ihe bụ zinc alloy.
2. Kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ otu iko na-enyo na ọnụ ụzọ abụọ.
3. Ọrụ nzuzo na ọrụ ntinye nwere ike ịhọrọ.
B. B Glass Splint + YALIS Dozọ leszọ
1. Ihe nkedo iko a nwere mpempe roba iji gbochie iko iko.
2. Kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụzọ otu-glazed na ọnụ ụzọ nwere okpukpu abụọ.
3. Enwere ike ijikọta ya niile ejiri aka n'ọnụ ụzọ YALIS.
4. Ọrụ nzuzo na ọrụ ntinye nwere ike ịhọrọ.
5. Ọ matched nkịtị magnetik mortise mkpọchi.